Deni oo ka hadlay qaraxii Garowe iyo geerida gudoomiyihii gobolka Nugaal
Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa bogaadiyey ka hortagga ay ciidamadu sameeyaan.
GAROWE, Puntland - Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo si adag u cambaareeyay qaraxii ka dhacay agagaarka saldhiga booliska Garowe kaasoo lagu beegsaday mas'uuliyiin ayaa ka tacsiiyey geerida gudoomiyaha gobolka Nugaal.
War-saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyadda Puntland ayaa lagu sheegay in Deni uu bogaadiyey talaabada deg-dega ah ee ciidamadda kaga hortageen "gabood-falkaas uu cadowga la damacsanaa shacabka iyo masuuliyiinta".
Marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi [Gu'jir] ayaa u dhintay dhaawac kasoo geeray is-miidaamintaas ay dusha saaratay Al-Shabaab, xoogaga gacansaarka la leh shabakada argagixisadda ah ee loo yaqaano Al-Qaacida.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaaya macagaca Dowladda iyo kan Shacabka Puntland waxa uu ka tacsiyaynayaa Geerida Alle ha u naxariistee Guddoomiyihii gobolka Nugaal Marxuum Cabdisalaan Xasan Xirsi (Gujir) oo arxan laawayaasha cadawga ummadda Soomaliyeed gaadmo ismiidaamin ah dhaawac kasoo gaadhay hadda u geeriyoodey.
Guddoomiyuhu waxa uu gudanaayey waajibaadkiisa shaqo ee uu u hayo shacabkiisa, waxaana uu ku sugnaa xilligaasi Saldhigga Dhexe ee caasimadda Dowladda Puntland ee Garoowe.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu si kulal u cambaaraynayaa falkaasi argagixiso ee lala beegsaday Saldhigga Dhexe ee Caasimadda Dowladda Puntland ee Garoowe.
Waxa uu Madaxweynuhu Alle "SWC" uga baryayaa intii ku dhaawacantay inuu u boogadhayo, waxaana uu Madaxweynuhu bogaadiyey ka hortagga deg degga ah ee ay ciidamada Puntland kaga hortageen cadawga gabood falkaasi la damacsanaa shacabka iyo masuuliyiinka waajibaadkooda shaqo gudanaayey.
Puntland oo beenisay warar laga faafiyey Deni iyo Karaash
Puntland 07.04.2020. 19:00